Modia fanina eo ihany | Hery - Tsiky dia ampy |
Modia fanina eo ihany
2010-03-25 @ 08:10 in Politika
Averimberin'ny HAT foana fa mandeha tsara daholo ny zvatra rehetra ao Madagasikara ao. Na ny fitantanan-draharahan'ny ministera isankarazany, na ny resaka sosialy, na ny resaka fandriam-pahalemana, ny fampianarana sns. Toa hoe manaiky izay lazainy daholo ny "vahoaka" ka hiditra amin'ny fitantanana samy irery ny fifidianana izy ireo.
Odiany fanina ny ultimatum-n'ny mpianatra eny ankatso. Odiany fanina ny grevin'ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy. Odiany fanina ny fitotongan'ny Ariary mihoatra amin'ny Euro sy ny Dollar. Odiany fanina ny fitaintainan'ny olona amin'ny vono olona sy fandrobàna miaraka amin'ny basim-panjakana. Odiany fanina ireo nafana fo TGV teo aloha manomboka tonga saina saingy tsy afa-miteny intsony. Odiany fanina ny fikorontanana anatiny ao amin'ny tafika.
Dia hoy aho hoe odio fanina ao ihany. Marivo fitadidy angamba ka tsy mahatsiaro intsony fa io mody fanina io no anisan'ny nampiongana an-dRavalo. Variana misahana loatra ny fampandrosoana ankapobeny (làlana, varotra, fifandraisana amin'ny firenen-kafa) ka tsy nahita fa tsy araky ny sasany intsony ny rythme.
Ka tohizo ihany ny mody fanina fa dia hanenina eo.